Resources Archives - Social News Daily
Chikwata chako chiri kushanda pamwe chete zvakanaka here? Kana zvisina kudaro, pamwe ungada kutanga zviitwa zvekuvaka timu zvinosimudzira kushamwaridzana uye mweya wekushandira pamwe. Vashandi vanoshanda ...
YouTube inzvimbo yakakurumbira yesocial media webhusaiti ine vateereri vepasirese. Inogona kunge iri chishandiso chine simba kune vanopa zvemukati uye mabhizinesi kuparadzira ...
Kana iwe wakafanana nevanhu vazhinji, pfungwa yekufambisa imba yako inogona kutyisa. Haisi iwe chete iwe unofanirwa kubata nekunetswa ...
by SND Team 1 vhiki kare 1 vhiki kare
Munguva yedhijitari yatiri kurarama mairi, matekinoroji edhijitari ave chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwezuva nezuva uye maitiro atinoita bhizinesi. Pamwe chete...
Iwe uri mutsva kune yepamhepo nyika yekudzidzisa? Kana usati wambohaya mudzidzisi kare, ungasaziva pekutangira. Ehe,...
Mazano Ekuvandudza Ekugadzira Nail Polish Mabhokisi EBhizinesi Rako
Kana kudhirowa nekushongedza zvipikiri zvako kwaive hunyanzvi, saka vakadzi vaizove maPicassos ayo, uye hapana kukahadzika kudiki ...
by SND Team 2 week ago 2 week ago
Munguva pfupi yapfuura Yakabudirira Kubvisa kweMakiyi Mhosva dzeCyber ​​​​neHurumende
Kuzivikanwa kwemanyepo, chaiwo akavanzika network (VPNs), uye zviuru zvemamaira hazvina kukwana kuchengetedza macybercriminals kubva kuDhipatimendi reJustice (DOJ). Yakaomeswa, yakanyatso kurongwa...
by SND Team 2 week ago 7 mazuva apfuura
Unoziva Kuti Eau De Toilette nePerfume Zvakasiyana Sei?
Zvakare, eau de toilette ine pakati nepakati nepakati boka remafuta anonhuhwirira. Iine 5% - 15% inonhuwira mafuta. Iine mvura yakawanda...
Kutsvaga nzira yekurodha TikTok mavhidhiyo
TikTok yakabata pfungwa dzevanhu payakatumira pfungwa yakakosha yekuwedzera izwi kune chero vhidhiyo uye zvese zvakatanga nekuita majee kurekodha ne...
Maitiro ekugadzira logo ine qr kodhi
Chiratidzo chiratidziro chemunhu chinoshandiswa nebhizimusi rekutengesa, munhu kana nharaunda kuwedzera kuzivikanwa munharaunda. Inosiyanisa chigadzirwa ...
Maitiro Ekusarudza Yakanaka Forex Trading Platform!
Kuedza mu Forex kuchinjana kunogona kuve iyo nguva inotsanangura muhupenyu hwemunhu yeakanyanya kunaka kuita mari. Iyo Forex yekutengesa chimiro chinoshandiswa ne...
9 nzira dzekutengesa bhizinesi rako
Nhanganyaya: Pane nzira dzakati wandei dzekutengesa bhizinesi, uye mabhizinesi mazhinji achashandisa nzira dzakasiyana siyana kusvika kumisika yavanoda. Iyi blog post icha...